Arrin cabsi ku haysa oo la ogaaday in Sacuudiga iyo Imaaraadka ay ku qasabtay qorshahooda Geeska Afrika. – Xeernews24
Alex de Waal oo maamula hay’adda cilmi baadhista nabadda dunida ee taal Jaamacadda Tufts ee dalka Mareykanka ayaa waxaa uu sheegayaa in dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka ay raadinayaan xalka cabsi ay mustaqbalka ka qabaan Iran.
“Ku dhawaad 10 sanno kahor Sucuudigu waxa uu bilaabay qorshaha maamulidda marinka badda ee baayacmuushtarka maro (Red Sea Fleet) iyo Badda Cas,” ayuu u sheegay De Waal. “Waxaa ugu wacan cabsi ay ka qabto in Iran ay xirato marinka kale ee Strait of Hormuz (Marin biyoodka u dhexeeya Iran iyo Imaaraadka) kaas oo ay baayacmuustarki ka baxaan, Sucuudigu waxa uu u baahan doonaa meel ay dhabbe ay uga maarmaan si ay Shidaalkooda u dhoofiyaan. Taas, waxa ay keentay in ay dhisaan dhuumo iyo meelo lagu sifeeyo shidaalka oo ku yaal xeebta Badda Cas, ayna diiradda saaraan marinka Bab-el-Mandeb ee Geeska Afrika dul-mara”.”
Elizabeth waxay sidoo kale tidhi “Imaaraadka, waxa ay iyaduna isu qaabeysay noqoshada mid maalgaliye dhinaca saadka, dekeddaha iyo horumarinta ganacsiga,” ayey sharraxday.
Bishii Agoosto ee sannadkan 2018, Itoobiya waxa ay ku dhawaaqday in Imaaraadka qorsheeneyso maalgashiga dhuumo dhexmara Eritrea iyo Itoobiya. Arrintan ayaa timid bil kaddib markii uu Madaxweynaha Eritrea Isias Afwerki ku soo dhaweeyey caasimadda Eritrea ee Asmara Ra’iisul Wasaaraha is bedel doonka ah ee Itoobiya Abiy Ahmed markii ugu horreeysay 20 sanno kaddib.
Maamulka Somaliland oo ku fashilmay in ay Ruushka ku wareejiso magaalada Sa... Cabdi Iley oo ilmayn oo codsi iyo baryootaan soo dirtay